VaObert Mpofu Voramba Kupa Humbowo paNyaya yeMangoda ekwaMarange
Apo paramende yatanga kuongorora zvekare kubiwa kwemari yemangoda ekwaMarange, vaimbove gurukota raiona nezvezvicherwa pakakurumbirwa kucherwa kwemangoda, VaObert Mpofu, neChina vakatsidza kuti havasi kuzofa vakapa humbowo kukomiti iri kuita ongororo iyi kana ichitungamirwa, nenhengo yeNational Assembly, yakazvimirira, VaTemba Mliswa.
Pakutanga VaMpofu vakati hapana mutemo unovasungira kuti vataure pamusoro pezvebazi ravasisashandire.
Vakatiwo VaMliswa vakambovashanyira kumba kwavo pamusoro penyaya iyi uye vari kugaro vanyomba nekutaura zvakawanda pamusoro pavo mumapenhau nekudaro havasi kufa vakapa humbowo kukomiti yaVaMliswa.
Asi VaMliswa vakayambira VaMpofu kuti paramende ine simba rekukoka makurukota kana munhu wese kunze kwemutungamiriri wenyika chete.
Vakatiwo havasati vamboona munhu anonyepa saVaMpofu uye vayamabira kuti vasataura nemunhu arikutaura mumusangano webato ravo reZanu PF.
Pakandirwana makobvu nematete pakati paVaMpofu naVaMliswa izvo zvaita kuti dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita saVaTafanana Zhou veZanu PF dzipe pfungwa yekuti dai komiti yanzwa pfungwa mutauriri weNational Assembly VaJacob Mudenda panyaya iyi.
Asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita saVaMasangano Matambanadzo, veZanu PF dzakatsigira danho raVaMpofu rekuramba kutaura dzichiti komiti iyi iri kuda kunyadzisa VaMpofu.
Asi vamwe vakaita saVaProsper Mutseyaami naVaFani Munengami veMDC-T vakati VaMpofu vanofanirwa kupa humbowo kukomiti iyi vachida vasingadi uye kana vaine chichemo vanofanira kumhan’ara kumutauriri wedare reparamende VaJacob Mudenda.
VaMliswa vakatsidzawo kuti Mpofu vachautaura chete vachiti nyaya yavari kuda kunzwa nezvayo yakakosha chose uye hainei nezvamatongerwo enyika.
Aka ndekechitatu paramende ichiongorora nyaya iyi uye ongororo mbiri dzakaitwa dzakaratidza kuti zvinhu zvainge zvisingafambiswe zvakanaka kwaMarange.
Pakatangwa ongororo iyi svondo rapfuura, vemasangano anoshanda akazvimirira, aiongorora zvaitika kwaMarange veZimbabwe Environment Lawyers Association, Centre for Natural Resources Governance, vakaudza komiti iyi kuti vanobvumirana nevaimbove mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, avo vakataura kuti mangoda anodarika mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora ainge atsakatika.
Vakati nyika inongona kunge yakatorasikirwa nemangoda anokosha mabhiriyoni makumi mashanu emadhora.
Makambani ese masere aichera mangoda kwaMarange anotarisirwa kumira pamberi pekomiti iyi nhasi.
Nyika haina kuwana mari yaitarisirwa nevakawanda kubva kumangoda ekwaMarange uye kana kwaMarange kwacho hakuna budiriro kana chinoratidza kuti kunocherwa mangoda.